Ifulethi Lokubuka i-Bush - I-Airbnb
Ifulethi Lokubuka i-Bush
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Deirdre
U-Deirdre Ungumbungazi ovelele
Sineyunithi encane, enekhishi eliyisisekelo negumbi lokugezela ngaphansi kwendlu yethu. Ibukeka ngaphandle endaweni yokulondoloza izihlahla futhi ilanga kakhulu futhi iyimfihlo enendawo yayo yokungena kanye nompheme. Umbhede ungusayizi we-queen.
Ukuze sinikeze indawo yokuhlala engabizi futhi sinakekele indawo ezungezile sisebenzise iminyango esetshenziswa kabusha, amafasitela nemikhiqizo yokwakha lapho sakha le ndawo. Iningi lefenisha yethu lisetshenziswa kabusha. Iyunithi yethu inikeza indawo yokuhlala ethokomele, ehlanzekile nethokomele, hhayi ifenisha yakamuva.
Izivakashi zamukelekile ukujabulela nokusebenzisa indawo yethu yengadi futhi zizisize kunoma iyiphi imifino eziyithandayo. Sinamakati amabili anobungane. Singathanda ukuthi izivakashi ezifuna ukuhlanganyela futhi zixhumane nathi kanye nendawo yethu futhi ezivakashela i-Wellington, umndeni, abangane noma lapha ngomsebenzi.
4.65 out of 5 stars from 226 reviews
4.65 · 226 okushiwo abanye
Kukhona Ipaki Lesifunda ekupheleni komgwaqo kanye nokuhamba kwamahlathi okuningi eduze. Kucishe kube ngu-3.5km ukuya enkabeni yedolobha lase-Lower Hutt lapho wonke amasevisi angatholakala khona isib. Indawo Yokubhukuda, Inxanxathela yezitolo, Izitolo ezinkulu eziningana, Imnyuziyamu, i-Site, Umtapo Wezincwadi, Amathilomu, Izindawo zokudlela njll. Kukhona Ibhishi nezitolo zefilimu ezithandekayo kanye ne-Boutique, ama-Cafe, Izindawo zokudlela ezise-Petone (cishe imizuzu engu-8 ngemoto).
Sicela usazise uma kukhona okudingayo.
UDeirdre Ungumbungazi ovelele